တရုတျကွီး နဲ့ ထိပျတိုကျရငျဆိုငျဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတာလား ဒူတာတေး…. - Pyit Time Htaung
တရုတျကွီး နဲ့ ထိပျတိုကျရငျဆိုငျဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတာလား ဒူတာတေး….
By Pyit TimePosted on October 17, 2020
တောငျတရုတျ ပငျလ ယျတှငျး အငွငျးပှားေ ရပွငျမှာ ဖိလဈပိုငျ စှမျးအငျရှာဖို့ဆုံးဖွတျ ( သာကော ကွီးက သူအပိုငျ ပါလုိ့ တှငျတှငျပွောနတေဲ့ နရောမှာ လုပျစားမယျ ဆိုတော့ သာကောနဲ့ ထိပျတိုကျ ရငျဆိုငျဖို့ ဆုံးဖွတျ လိုကျတာလား ဒူတာတေး….)
တောငျတရုတျ ပငျလယျတှငျး ရနေံနဲ့ ဓာတျငှရှေ့ာဖှေ တူးဖျောရေး လုပျငနျးတှေ ၆ နှဈကွာ ယာယီတားမွ ဈထားတဲ့ အမိနျ့ကို ဖိလဈပိုငျ အစိုးရက ရုပျသိမျးလိုကျ တာဟာ ကိုယျ့တနိုငျငံရဲ့သဘောထားနဲ့ ဆုံးဖွတျခဲ့ တာဖွဈကွောငျး ဖိလဈပိုငျ စှမျးအငျဝနျကွီးက သောကွာနမှေ့ာပွောပါတယျ။
တောငျတရုတျ ပငျလယျတှငျး စှမျးအငျရှာဖှေေ ရးလုပျင နျးတှကေို ဖိလဈပိုငျနိုငျငံနဲ့ ပူးပေါငျးလုပျကို ငျနိုငျဖို့ မေြျှာလငျ့ကွောငျး တရုတျနိုငျငံခွားရေး ဌာနပွောခှငျ့ရသူ Zhap Lijan က ပွောထားခြိ နျမှာပဲ ဖိလဈပိုငျ အစိုးရရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ ထှကျပျေါလာတာပါ။
ပိုငျဆိုငျမှု အငွငျးပှားနတေဲ့ ရပွေငျမှာ စှမျးအငျ ရှာဖှရေေး ပူးတှဲလုပျဆောငျနို ငျခွဆေိုငျရာ နှဈနိုငျငံ နားလညျမှုစာခြှနျလှာကို အခုဆုံးဖွတျခကျြက ထိခိုကျစမှော မဟုတျဘူးလို့ စှမျးအငျဝနျကွီး Alfonso Cusi ကသတငျးထော ကျေ တှကိုေ ပွာပါတယျ။
တရုတျနဲ့ ရပွေငျပိုငျနကျအငွငျး ပှားမှုတှကွေောငျ့ စှမျးအငျရှာေ ဖှရေးလုပျငနျးေ တှရပျထားဖို့ ၂၀၁၄ ခုနှ ဈမှာခမြှတျခဲ့တဲ့ အမိနျ့ကို သမ်မတ ရိုဒရီကို ဒူတာတေးက ရုပျသိမျးလိုကျတဲ့အတှကျ စှမျးအငျရှာဖှရေေး လုပျငနျးတှေ ပွနျစဖို့နဲ့ စှမျးအငျဝနျကွီး ဌာနအနနေဲ့ လုပျငနျးစာခြုပျတှေ ထုတျပေးနိုငျဖို့ လမျးပှငျ့သှားစပေါတယျ။
စှမျးအငျရ ငျးမွဈတှေ ပေါကွှယျလှတဲ့ တောငျတရုတျ ပငျလယျရပွေငျန ယျနိမိတျကို သူပိုငျအဖွဈ တရုတျ ရဲ့တငျပွခကျြကို ကုလသမဂ်ဂအပွညျပွညျဆိုငျရာ ခုံသမာဓိ အဖှဲ့က
၂၀၁၆ ခုနှဈမှာ ပယျခခြဲ့တဲ့အပျေါ သမ်မတ ဒူတာတေးက ပွီးခဲ့တဲ့လမှာ အပွငျးထနျဆုံး ကာကှယျပွောဆိုပွီးတဲ့နောကျ ရနေံရှာဖှရေေး ယာယီတားမွဈမိနျ့ကို ခုလို ရပျနားလိုကျတာလညျးဖွဈပါတယျ။
CRD_MOE WIN OO
တောင်တရုတ် ပင်လ ယ်တွင်း အငြင်းပွားေ ရပြင်မှာ ဖိလစ်ပိုင် စွမ်းအင်ရှာဖို့ ဆုံးဖြတ် ( သာကော ကြီးက သူအပိုင် ပါလုိ့ တွင်တွင်ပြောနေတဲ့ နေရာမှာ လုပ်စားမယ် ဆိုတော့ သာကောနဲ့ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်တာလား ဒူတာတေး….)
တောင်တရုတ် ပင်လယ်တွင်း ရေနံနဲ့ ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေ တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ၆ နှစ်ကြာ ယာယီတားမြ စ်ထားတဲ့ အမိန့်ကို ဖိလစ်ပိုင် အစိုးရက ရုပ်သိမ်းလိုက် တာဟာ ကိုယ့်တနိုင်ငံရဲ့ သဘောထားနဲ့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ တာဖြစ်ကြောင်း ဖိလစ်ပိုင် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးက သောကြာနေ့မှာပြောပါတယ်။
တောင်တရုတ် ပင်လယ်တွင်း စွမ်းအင်ရှာဖွေေ ရးလုပ်င န်းတွေကို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ကို င်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဌာနပြောခွင့်ရသူ Zhap Lijan က ပြောထားချိ န်မှာပဲ ဖိလစ်ပိုင် အစိုးရရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ထွက်ပေါ်လာတာပါ။
ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားနေတဲ့ ရေပြင်မှာ စွမ်းအင် ရှာဖွေရေး ပူးတွဲလုပ်ဆောင်နို င်ခြေဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံ နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို အခုဆုံးဖြတ်ချက်က ထိခိုက်စေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ စွမ်းအင်ဝန်ကြီး Alfonso Cusi ကသတင်းထော က်ေ တွကိုေ ပြာပါတယ်။
တရုတ်နဲ့ ရေပြင်ပိုင်နက်အငြင်း ပွားမှုတွေကြောင့် စွမ်းအင်ရှာေ ဖွရေးလုပ်ငန်းေ တွရပ်ထားဖို့ ၂၀၁၄ ခုနှ စ်မှာချမှတ်ခဲ့တဲ့ အမိန့်ကို သမ္မတ ရိုဒရီကို ဒူတာတေးက ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် စွမ်းအင်ရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းတွေ ပြန်စဖို့နဲ့ စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဌာနအနေနဲ့ လုပ်ငန်းစာချုပ်တွေ ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ လမ်းပွင့်သွားစေပါတယ်။
စွမ်းအင်ရ င်းမြစ်တွေ ပေါကြွယ်လှတဲ့ တောင်တရုတ် ပင်လယ်ရေပြင်န ယ်နိမိတ်ကို သူပိုင်အဖြစ် တရုတ် ရဲ့တင်ပြချက်ကို ကုလသမဂ္ဂအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခုံသမာဓိ အဖွဲ့က
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ပယ်ချခဲ့တဲ့အပေါ် သမ္မတ ဒူတာတေးက ပြီးခဲ့တဲ့လမှာ အပြင်းထန်ဆုံး ကာကွယ်ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက် ရေနံရှာဖွေရေး ယာယီတားမြစ်မိန့်ကို ခုလို ရပ်နားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Previous post ရှေးကောကျပှဲ အတှကျ အကောငျးဆုံး မဲဆှယျစကားတဈခှနျးပွောပီး မဲဆှယျလိုကျတဲ့ ထရနျ့
Next post တဖကျနဲ့ တဖကျနငျးထားတဲ့ အမွီးတှေ ခပြွလိုကျတဲ့ ထိုငျဝမျ နဲ့ တရုတျကွီး…..ညိပီလေ